सन्दीप बढे कि चढे ! :: हेमन्त काफ्ले :: Setopati
यतिखेर नेपालको क्रिकेटमा चर्चाको शिखरमा छन् युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने। इन्डियन प्रिमियर लिगमा अचानक आवद्धता पाएपछि एकाएक उनको चर्चा चुलिएको हो।
खेल र भाग्यले साथ दिएपछि उनले थुप्रै मुलुकका व्यवसायिक क्रिकेट लिगमा लोकप्रिय युवा बलरका रूपमा स्थान बनाए । क्यानेडियन, अफगान, बंगलादेशी लिग हुँंदै अस्ट्रेलिया र इंगल्यान्डको व्यवसायिक लिगसम्म आइपुगेका सन्दीप उमेरले मात्र १९ वर्ष भएका छन्।
मेलवर्नको मेलवर्न स्टार्समा आवद्ध भएका सन्दीपले अस्ट्रेलियन लिग बिग बासमा समेत राम्रो छाप छोड्न सफल भए। एकपछि अर्को मौकालाई चौकाका रूपमा सदुपयोग गरेर नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा सन्दीपले नयाँ आयाम कोरे।
एउटा नेपाली ठिटोले क्रिकेटको माध्यमबाट मुलुकको मान र सम्मान कायम गर्नु चानचुने कुरो होइन। नामले सुनेको र क्रिकेटमा देखेको सन्दीप लामिछाने फेरि 'बिग बास'मा दोस्रो पटक खेल्ने तरखरमा छन्।
अस्ट्रेलियन लिग खेल्न मेलवर्न आइपुग्दा पहिलो पटक सबैले उनको भब्य स्वागत गरे। करिब पन्ध्र हजार नेपालीको सहभागिता रहेको मेलवर्नको महोत्सव परेडमा समेत उनी सहभागी भए।
विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि सन्दीप आफैंमा प्यारो नाम थियो। मुलुकसँग जोडिएका गर्विलो व्यक्तिको उपस्थितिले प्रवासीलाई सधैं सहजै तान्ने गर्दछ। सन्दीप क्रिकेटमा जसरी अगाडि बढे, मानिसलाई उनको ख्यातिमा गर्व गर्ने र फेसबुकमा फोटो सजाउनेकाे मारामारी नै थियो। तर कतिले पाए, कतिले पाएनन्।
यतिखेर मेलवर्नका केही राष्ट्रियस्तरका खेलाडी तथा आयोजकहरूले नै सानै उमेरमा पाएको सफलतालाई बचाइराख्न सन्दीपले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेका छन्।
अहिले फेरि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्कासँग जोडिएर सन्दीपको अपरिपक्वताका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। नेपाली क्रिकेटमा अलग र फरक पहिचान बनाएका पूर्वकप्तान पारसलाई फेसबुकमा 'अनफलो' गरेका कारण पनि सन्दीपको टीकाटिप्पणी भैरहेको छ।
क्रिकेटमा उनको सफलतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन, उनी एक होनहार खेलाडी हुन्। तर खेलाडी भएपछि अनुशासन र व्यवहार पनि उनको सफलतासँंगै जोडिन्छ, आगामी दिनमा एउटा उत्कृष्ट खेलाडीले सम्मान लिँदै गर्दा सम्मान दिन पनि सिक्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनी परिपक्व देखिँदैनन्।
धेरैले उनलाई आफ्नो रोल मोडलको रूपमा पनि लिएका छन्। यति कलिलो उमेरमै क्रिकेटको माध्यमबाट नेपालमा उचाइ लिएका खेलाडी छैनन्। तर मान्छेले जति नै माथि पुगे पनि आफ्नो धरातललाई कदापी बिर्सिनु हुँदैन।
ठूला ठूला स्टारहरू हेर्दाहेर्दै सडकमा आएको पनि कैयन् उदाहरण छन्, त्यसैले सानातिना सफलताले मात्तिने अनि असफलतामा आत्तिने काम उनीबाट हुनु हुँदैन। सन्दीप लामो रेसका घोडा हुन्, उनीसँग अझै दसौं वर्ष खेल्न सक्ने उमेर र क्षमता छ, त्यसैले पनि धैर्यता उनका लागि महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको छ।
अनुशासन र आचरण खेलाडीका गहना हुन्। पारस उनका सिनियर खेलाडी मात्र होइनन्, अग्रज पनि हुन्, सानातिना कुरामा अनफलो गर्ने र रिस देखाउने कार्य सन्दीपले छाड्नु पर्दछ।
उनका बारेमा सकारात्मक टिप्पणी लेख्दै गर्दा उनको खेलले नै माइकजस्तै ठूलो स्वरमा उत्तर दिइरहने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। १९ वर्षे यी नेपाली ठिटोप्रतिको माया र मोह नै हो- यो सुझाव। अस्ट्रेलियाका सडकमा कहिलेकाहीँ ठूला 'स्टार प्लेयर' भेटिन्छन्। उनीहरू प्रशंसकसँग दिल खोलेर बोल्छन्, तस्बिर खिचाउँछन्।
प्रशंसकका लागि एउटा फोटो र हस्ताक्षर जीवनभरको उपहार बन्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का खेलाडीले राखिदिए सुनमा सुगन्ध हुन्छ। अनि संचार जगतको लागि पनि सन्दीप एउटा समाचार हुन्, उनी बोल्दा समाचार बन्छ, नबोल्दा समाचार बन्दैन।
उनका हरेक विकेट प्रशंसकको लागि गर्वको विषय बन्छन् भने केहीबेर हाँसेर बोल्दा, फोटो खिचिदिँदा के नै फरक पर्छ र? सन्दीपले सेतोपाटीसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘म फरक एटिट्युडकै कारण यहाँंसम्म आइपुगेको हुँ।' तर उनले कुन विषयलाई इंगित गरेका हुन् त्यो भने थाहा भएन।
कहिलेकाहीँ क्लबको अनुशासनमा रहेर होस् या कर्तब्यबोधले खेलाडीले बोल्न नमिल्ला, कसैको कुरामा चित्त नबुझ्ला त्यसलाई रिसले हैन, हाँसोले जित्न सके खेलसँगै खेलप्रेमीको मन र अग्रजको सम्मान जित्न सकिन्छ।
जे भए पनि इंग्ल्यान्डमा हुन लागेको नयाँ क्रिकेट ‘द हन्ड्रेड’मा एक लाख पाउन्डमा अनुबन्धन समेत भएका लोकप्रिय युवा बलरलाई सफलताको शुभकामना।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २७, २०७६, ०७:०८:००